«Chan 2018» : mahavelombolo ny Barea de Madagascar | NewsMada
«Chan 2018» : mahavelombolo ny Barea de Madagascar
Tontosa ny lalao tsapa nataon’ny Barea de Madagascar tamin’ny Uscafoot. Fihaonana, nisedrana ireo mpilalao vao nantsoina ary fanamafisana ny fiarahan’ireo efa tranainy, amin’ny fiatrehana an’i Angola.
Resin’ny Barea de Madagascar, tamin’ny isa 2 no ho 0, ny Uscafoot, omaly, teo amin’ny lalao fitsapana, mialoha ny hikatrohana amin’i Angola, hiadian-toerana, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy matihanina na ny “Chan 2018”, tanterahina any Kenya.
Baolina tafiditr’i Bila, teo amin’ny minitra faha-20-n’ny fidirana voalohany sy teo amin’ny minitra faha-59 nilalaovana. Mahavelombolo ny endri-dalaon’ny ekipam-pirenena malagasy, na mbola misy ihany aza ny tokony hahitsy eo amin’ny fandrindrana ny fanafihana sy ny tsy fahaizan’ireo mpilalao sasany manararaotra ny fahadisoana na fitavozavozan’ny mpifanandrina, izay tokony hahafatesana baolina.
Marihina fa saika nampilalaovin’ny mpanazatra avokoa ireo mpilalao rehetra voaantso, izay nahafahany mijery sahady ireo mety ho mpilalao 11 hilahatra voalohany amin’ny alahady ho avy izao. Tsiahivina fa tsy mbola namoaka ny anaran’ireo 18 handrafitra ny Barea de Madagascar ny mpanazatra.
Nosedraina tamin’iny fihaonana tamin’ny Uscafoot iny ihany koa ireo mpiandry tsatoby nantsoina, izay hisolo an’i Leda, tsy afaka hilalao noho ny karatra mavo roa azony. Mbola hitohy, anio sy rahampitso zoma, ny fanomanantenan’ny Barea de Madagascar. Fotoana, hanamafisana ny paikady farany, ary hanamboarana ireo lesoka hafa.
Mandra-piandry izany, tafita hiatrika ny ampaha-16-n-dalana amin’ny “Telma coupe de Mada” ny MI20 Analamanga, nandresy ny CFFA Analamanga, tamin’ny isa 4 no ho 0, ary ny Cnaps Sport Itasy, nanilika ny Disciples FC Analamanga, tamin’ny isa mavesatra 6 no ho 0.
Ankoatra izay, hotontosaina, anio any Mahajanga, ny manasa-dalana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, sokajy vehivavy. Hifandona amin’izany ny Askam sy ny Mifa ary ny lalaon’ny Mifa sy ny Asot.
Ho an’ny ligin’Analamanga kosa, fantatra fa ny Cosfa no ekipa faharoa hanampy ny Elgeco Plus, eo amin’ny fiatrehana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara. Resin’ny Miaramila, tamin’ny isa 2 no ho 0, ny AS Adema, teo amin’ny andro farany amin’ny “Poule des As”, natao tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina.